Podcast Ahịa anyị dị na Stitcher! | Martech Zone
Podcast Ahịa anyị dị na Stitcher!
Sunday, July 3, 2011 Monday, August 4, 2014 Douglas Karr
Marty Thompson mere ka m mata Stitcher, a kediegwu ngwa na aggregates pọdkastị na-eme ka ha mfe ịhụ na mkpanaka gị na ngwaọrụ. Ma ị nọ na iPhone, android, Blackberry, ma ọ bụ Nkwụ - ị nwere ike ibudata Stitcher wee gee ntị na nke anyị Ahịa Podcast na Edge nke Web Radio.
Ndị na-ege ntị na-egosi ihe nkiri na-etolite nwayọ ma anyị na-anụ ọ theụ nnukwu ndị ọbịa - gụnyere Lisa Sabin-Wilson, Eric Tobias, Chris brogan, Debbie Weil, Jason Falls, Scott Stratten, Nicholas CarrNa ọtụtụ ndị ọzọ. Emere ihe ngosi ndị a ihe karịrị ugboro 5,000 ma dịkwa na ya iTunes. Kwa izu, ị nwere ike ịbanye na ebe a na-akparịta ụka ebe ndị na-ege ntị na-akparịta ụka, tinye uru na ngosi ahụ ma jụọ ajụjụ.
Ọ bụrụ na ị na-eso ndị a Ahịa Tech blog na Facebook, ị ga-enweta ọkwa mgbe ihe ngosi a ga-amalite. Enwere m olileanya na ị nwere ike isonyere anyị kwa izu, ọ bụ nnukwu ohere ịmụta n'aka ndị isi na Azụmaahịa na Teknụzụ. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịnọ na ihe ngosi ahụ, anyị edepụtara ọnwa ole na ole mana ka anyị mara site na saịtị ahụ. Ọ bụrụ na ịnọ na Indianapolis, ị nwedịrị ike ịda ma nọrọ na ngosi na ọfịs anyị.
Daalụ maka nkwado - na mepụta akaụntụ efu na Stitcher na-ege ntị ka anyị ọhụrụ show! Ha nwere asọmpi ugbu a ebe ị ga - emeri Sonos S5 + ZoneBridge (uru $ 500).
Tags: Ahịa Podcaststitcherstitcher redio
Nov 12, 2011 na 4:28 PM
Emelitere post ahụ na mkparịta ụka vidiyo dị ukwuu nke Jeff na @geekazine na #bwela. Jide n'aka na ị na-ege ntị na ihe ngosi redio anyị - ọ bụ mgbe mkparịta ụka nwere nghọta na ndị ọbịa dị egwu.